Ahoana ny fomba hifehezana ny rafitra fandaharana amazonin'ny fikarohana Amazon?
Ny lanjan'ny vokatra ambony amin'ny Amazon dia mitovy amin'ny habetsaky ny fivarotana satria ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manindry ny vokatra voalohany hitany amin'ny Amazon SERP mamaly azy ireo ho ny tsara indrindra. Mba hampahafantarana ny vokatra hita ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana dia mila mahatakatra ny fomba fitantanana ny algorithm ofisialin'ny A9 ao Amazon.
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fitsipika fototra momba ny algorithm amin'ny algorithm alemôtika sy ny fandinihana manokana ny sanda tsirairay.
A9 na algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana Amazon
Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny PowerReviews, maherin'ny 1 000 000 mpanjifa Amerikana no manomboka ny fikarohana amin'ny Amazon. Google dia tonga amin'ny faharoa segondra, arahin'ny mpivarotra e-commerce malaza - cubre sofas. Ireo olona izay manomboka ny fikarohana momba ny Amazon, manazava ny safidin'izy ireo amin'ny alàlan'ny famokarana vokatra, fitsapana, fandefasana maimaim-poana, ary fifanarahana.
Ity fanadihadiana ity dia mampiseho ny herin'io sehatra varotra io ao amin'ny tranonkala. Manome tombontsoa sy tombontsoa maro ho an'ny mpivarotra izany. Na izany aza, mila mila miady amin'ny mpanentana indostrianao ianao mba hahitana ny zavatra hita ao amin'ny Amazon SERP.
Mba hifaninana, mila mahafantatra ny fomba iasan'ny Amazon A9 algorithm. Voalohany indrindra, tokony ekena fa ny A9 dia samy hafa amin'ny Google. Raha mitady mpanjifa mitady vokatra ilaina amin'ny Amazon, ny valin'ny fikarohana dia atolotra amin'ny dingana roa dingana. Amin'ny sehatra voalohany, ny mpampiasa dia mahazo ny lanjany indrindra amin'ny valin'ny fangatahana avy amin'ny katalaogy. Amin'ny dingana faharoa, ireo vokatra rehetra ireo dia sokajiana araka ny maha-zava-dehibe sy ny laza. Ny tanjona voalohany amin'ny Amazon dia ny hampitombo ny fidiram-bolan'ny orinasa tsirairay isaky ny mpanjifa. Raha ny fampirimina an-tserasera ao amin'ny aterineto dia mitondra vola bebe kokoa ho an'i Amazon, dia azo inoana fa ny laharana voalohany amin'ny valin'ny fikarohana. Ny Amazon dia miasa tsy tapaka eo ambany fanatsarana ny algorithm. Amin'izao fotoana izao, izy ireo dia mandray an-tanana ny anton-javatra toy ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa, ny fandalinana programmatika, ny mombamomba ny raharaham-barotra maoderina sy ny metrics. 1)
Ireo singa tena ilaina amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny algorithm
Misy antony telo mahatonga ny amboara hanamarika ny vokatra vokatra amin'ny pejy valin'ny fikarohana:
Ny voka-dratsiny mety hisy fiantraikany amin'ny fiovan'ny toetrandro dia ny fanamarinana, ny kalitao ary ny haben'ny sary sy ny politika. Raha tianao ny hanana fiovam-po ambony, dia mila mitandrina ny vidin'ny fifaninanana ianao. Ankoatra izany, dia zava-dehibe ny famoronana fanehoan-kevitra tsara momba ny vokatrao satria manome hevitra ny mpanjifa ho an'ny mpanjifa ny lazanao.
Ny tena fototry ny fanambarana an'i Amazona raha handinika ny pejy momba ny vokatrao amin'ny valin'ny fikarohana dia ny vokatra. Izany no mahatonga ny vokatra rehetra tokony hifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa. Mba hanatsarana io toe-javatra io, mila miasa eo ambanin'ny lohanao sy ny famaritana anao ianao ary eo ambanin'ny lisitrao. Ireo sehatra rehetra ireo dia mila atao am-pahamalinana sy mampiditra ny teny fikarohana.
Ireo toe-javatra ireo dia manampy ny fitazonana ny mpanjifa anisan'izany ny fanamarihana ny mpivarotra sy ny fandidiana. Noho izany, tsotra ny tsiambaratelo. Mila manome fahafaham-po ny filàn'ny mpanjifa ianao, ary hiverina any aminao izy ireo. Ny fanamafisana tsara kokoa manangona anao ao amin'ny pejinao, ny safidy ambony kokoa dia hahasarika mpanjifa be mpampiasa kokoa ho an'ny pejinao.